Filohan’ny oniversiten’i Toamasina: mitaky mangarahara sy porofo mazava ny Seces | NewsMada
Filohan’ny oniversiten’i Toamasina: mitaky mangarahara sy porofo mazava ny Seces
Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, fa esorina amin’ny toerany ny filohan’ny oniversite ao Toamasina noho ny fitantanana tsy mahoby. Mitady porofo mazava ny Seces.
Manoloana ny fanesorana ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina, nanao valin-kafatra avy hatrany ny fikambanan’ny Seces ka nilaza, omaly, fa mitaky ny porofo mazava hiampangana ity namany ity ka nahatonga izao fampitsaharana ny fe-potoam-piasany izao. Mitaky ny antony mazava voalaza fa fahadisoana goavana nataon’ity filohan’ny oniversiten’i Toamasina ity ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra namany ahafahan’izy ireo manaiky marina ny zava-mitranga.
Raha toa ka voaporofo tokoa fa nanao fitantanana tsy nety nandritra ny fitondran’ny oniversite ny filoha, azo atsahatra amin’ny fe-potoam-piasany. Amin’ny alalan’ny filankevitry ny minisitra ny manala azy. Apetraka avy hatrany ny « comité interimaire » misahana ny fampandehanan-draharaha eo anivon’ny oniversite mandra-pisian’ny fifidianana manaraka. Miara-miala aminy ny lefitra sy ny mpiara-miasa aminy rehefa miala ny filohan’ny oniversite.
Ny olona zokiny indrindra sy ireo sojabe ary ny tale isan-karazany mandrafitra ny vaomiera no mitantana vonjimaika.
Ireo mivondrona ao aminy Seces, mitaky ny fampiharana ny mangarahara eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny tany tan-dalàna ary tsy hanavahana na iza na iza. Tsy tokony hisy tombo sy ala ny lalàna. Mitaky fampiharana ireo ny Seces ary mitaky porofo araka ny fitakian’ny mpampianatra mpikaroka. Hatao izany hisian’ny fitoniana sy ny filaminana manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan’ny oniversite sy ny raharaham-pirenena izao.